“ကဗျာ” လို့ ﻿ပြောလိုက်သလား (၄) – zlkontempo
၂။ ဒါက ကဗျာနဲ့စိတ်ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောရခက်တာအမှန်ပါပဲ။အထူးသဖြင့်တစ်ယောက်စီရဲ့ပုဂ္ဂလအတ္တဘဝ subjectivity စိတ်ရဲ့နက်ရှိုင်းတဲ့နဲ့ဆိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။အနောက်တိုင်းအယူမှာဆိုအပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ လူတစ်ဦးစီရဲ့မသိစိတ်၊လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ဘုံမသိစိတ်၊လူသားထုရဲ့ဘုံမသိစိတ်ကိစ္စတွေနဲ့လည်းဆိုင်နေပါတယ်။လူတွေမှာမသိသေးတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမယ့်ပညာရှင်အသီးသီးကလေ့လာနေကြပါတယ်။ဒီကိစ္စကို Cognitive psychology ကလေ့လာနေတဲ့အတွက် ဒီနေ့မှာ Cognitive poetics ဆိုတာရှိနေပါပြီ။သိချင်ရင်ရှာဖတ်လို့ရပါတယ်။
၃။ လောကီလွန်ကိစ္စ၊ဂမ္ဘီရကိစ္စ၊မှော်ကိစ္စတွေကတော့ဆင်ခြင်ယုတ္တိနည်းနဲ့မလေ့လာနိုင်သေးတဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းဆိုင်းငံ့ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြသူတွေရှိသလိုကဗျာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကိစ္စတွေကိုငြင်းပယ်လိုက်သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေဟာ ကဗျာရဲ့နာမ်ပိုင်းအခန်းမှာပြန်ပြောရမှာတွေဖြစ်ပါတယ်။နာမ်ကိစ္စ၊ဝိဥာဏကိစ္စ၊လောကီလွန်ကိစ္စမို့ပြောလို့မရဘူးဆိုရင် ဘာသာရေးယုံကြည်မှုကိစ္စတွေအကြောင်းရှိတယ္ဆိုတာနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြရမလိုပျဲဖစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာမဖြစ်မနေပြောရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုကတော့ သိမှု/သုတတည်ဆောက်မှုကိစ္စမှာ concept အတွေးထည် နဲ့ definition အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် တို့ရဲ့ကျွဲပားမှုပျဲဖစ်ပာတယ်။concept ဆိုတာ စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့တည်ဆောက်ထားမှုဖြစ်ပါတယ်။ဘာလဲတော့သိသယောင်ယောင်ကအစပါတယ်။ concept အတွေးထည်ဟာ အသေအချာသိတာအထိရှိနိုင်ပါတယ်။ definition ကတော့ဘာသာစကားနဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာတင်ရပ်ပြီးအတွေးထည်ဖြစ်မလာတာရှိသလို အတွေးထည်ကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုလုပ်တတ်၊မပြုလုပ်လိုတာလည်းရှိပါတယ်။
“ကဗျာ” လို့ပြောလိုက်ရင် အတ္တနောမတိနဲ့ပဲပြောသလား၊အတွေးထည်နဲ့ပြောသလား၊အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားမှုပေါ်အခြေပြုပြောသလားဆိုတာကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Poetry ရဲ့ knowledge-construction မှာ pre-concept၊ concept၊ နဲ့ definition တွေဟာအရေးပါတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်။
၃. ၂။ အဘိဓာန်အချို့ရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်တွေ
အထက်မှာ ‘ကဗျာ’ ကိုဖွင့်ဆိုလို့မရဘူး ဆိုတဲ့အယူအဆတင်ပြပြီး ဒီမှာတော့ ‘ကဗျာ’ ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားချက်အချို့ကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
(အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေပါနေတဲ့အတွက်မဖတ်ချင်လည်းကျော်သွားလို့ရပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမုန်းကြောက်တဲ့ anglo-phobia တို့ နိုင်ငံခြားက ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ရကောင်းလား၊မြန်မာလိုပဲမရေးရကောင်းလား ဆိုတဲ့ မျိုးချစ် xenophobia တွေလည်းရှိတတ်တဲ့အတွက်ကြိုပြောတာပါ။ပုတ်ခတ်ဖို့မရည်ရွယ်ပါ။အရှိကိုအရှိအတိုင်းပြောခြင်းသာ။ထားပါတော့)။
နာမည်တပ်ပြောလို့ရတဲ့အဘိဓာန်တွေကတော့ Merriam-Webster ၊ Cambridge ၊ Collins ၊ Macmillan ၊ Longman ၊ Webster’s New World College Dictionary ၊ American Heritage တို့ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရထုတ် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ကျောင်းသုံးအဘိဓာန်မှာပါရှိတဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ကတော့
poetry = ကဗျာ၊လင်္ကာ လို့ပဲဆိုထားပါတယ်။
အထက်ပါအဘိဓာန်တွေထဲက ‘poetry’ ဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုတစ်ခုစီထုတ်ပြမယ့်အစားဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုစီထဲက ထင်ရှားတဲ့စကားလုံးတွေကိုအောက်ပါအတိုင်းထုတ်ပြချင်ပါတယ်။
၁။ literature ၊ literary work
၂။ art form
၃။ expression of feelings and ideas
၅။aquality of beauty and harmony
၆။ use of devices and literary techniques
တွေ ကာရံတွေ နဘေတွေ ထပ်ကြော့တွေ
ကဗျာသုံး ‘ပစ္စည်း’တွေ နဲ့ စာပေ/ကဗျာဆိုင်ရာ
နည်းနာ တက္ကနိ တွေသုံးစွဲခင်း
၇။ use of aesthetic qualities of language
၈။ to evoke meanings
၉။ in addition to or in place of/instead of
prosaic ostensible meaning or notational
and semantic content
(ဒါဟာ #၈ ရဲ့အဆက်ပါ)
သို့မဟုတ် ရည်ညွှန်းအနက် တို့အစား(သို့မဟု
တ်) တို့အပြင် (အခြား)အနက်များထွက်ပေါ်စေခြင်း
၁၀။ not prose
၁၁။ emphasize form over content
၁၂။ composition…exhibiting conscious attention to patterns
၁၃။ the art, theory, or structure of poems
ကဗျာပုဒ်တွေရဲ့အဆောက်အအုံ သို့မဟုတ် သီအိုရီ
၁၄။ the act or practice of composing poems
၁၅။ ‘poetical’ quality
၁၆။ the essence or characteristic ofapoem
ကဗျာပုဒ်တစ်ပုဒ်ရဲ့ အနှစ်သာရ သို့မဟုတ် စရိုက်လက္ခဏာ
ကဗျာဟာစာပေအနုပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်သလိုစာပေအနုပညာလက်ရာတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ ‘အနုပညာရပ်’ နဲ့ ‘လက်ရာ’ တို့ရောထွေးနေတာသတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။အင်္ဂလိပ်မှာလည်းမရှင်းတဲ့အခါတွေရှိပါတယ်။စာပေအနုပညာရပ် ကို the art of Poetry လို့ခေါ်ပြီး လက်ရာကိုတော့ poem လို့ခေါ်ပါတယ်။ျနော်လည်း ‘ကဗျာ’ နဲ့ ‘ကဗျာပုဒ်’ ကိုခွဲခြားပါတယ်။အနုပညာရပ် နဲ့အနုပညာလက်ရာ/ပစ္စည်း။
ဒါပေမယ့် ‘ကဗျာ’ ‘Poetry’ ကို ကဗျာဆရာတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ကဗျာ(အစုအဝေး) ၊တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့ကဗျာ(အစုအဝေး)၊ကဗျာအမျိုးအစးတစ်ခုရဲ့ကဗျာ(အစုအဝေး)အဖြစ်ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲတာလည်းရှိသေးသကို။ဥပမာ၊ ဇော်ဂျီရဲ့ကဗျာ၊၂၀ရာစုမြန်မာကဗျာ၊ ခေတ်စမ်းကဗျာ။ဒီနေရာမှာ ‘ကဗျာ’ ကို အနုပညာရပ်/လက်ရာ လို့ခွဲမမြင်ပဲ ထပ်တူပြုထားတဲ့သဘောတွေ့ရပါတယ်။
အရေးအသားတစ်ခုကို “အဲဒါကဗျာလား” လို့မေးလာရင်ဘယ်လိုဖြေဖို့ကြိုးစားမလဲ။ဒီထက်ပိုပြီး အဲဒီအရေးအသားဟာကဗျာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြေရှင်းပြမလဲ။’ကဗျာဟာခံစားမှုပဲ။အဲဒီအရေးအသားကိုခံစားရတယ်။အဲဒါကြောင့်ကဗျာဖြစ်တယ်။’ လို့ပဲပိတ်ပြောမလား။’ခံစားမှုအကြောင်းရေးထားတာကိုခံစားရတယ်။အဲဒါကြောင့်အဲဒါဟာကဗျာ (စာပေအနုပညာ)ပဲ။’ လို့ပြောရုံနဲ့ပြီးအံ့မထင်ပါ။အထက်ပါဖွင့်ဆိုချက်တွေထဲက ‘စာပေအနုပညာ/အနုပညာအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ခြင်း၊ရေးသူရဲ့ခံစားမှုဖော်ပြဖွင့်ဟချက်ပါရှိခြင်း၊ဖတ်သူရဲ့ခံစားမှုကိုလှုံ့ဆွခြင်း၊’ တို့ပါရှိပေမယ့် ကျန်ရှိတဲ့ နံပါတ် ၅ ကနေ ၁၆ အထိမပါဝင်သလို၊ပါဝင်ထည့်သွင်းပြောဆိုမှုမရှိသလိုဖြစ်နေပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့ ဖွဲ့စပ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံသဏ္ဍာန်အပိုင်း၊ဘာသာစကားရဲ့အခန်းကဏ္ဍ၊အဓိပ္ပါယ်ပြုလုပ်တည်ဆောက်ပုံ၊ကဗျာပုဒ်ဖွဲ့စည်းမှုလက်တွေ့၊ကဗျာပုဒ်ရဲ့အဆောက်အအုံ/သီအိုရီ/အနု-အတတ်ပညာ၊ကဗျာအရည်သွေး၊ကဗျာပုဒ်ရဲ့အနှစ်သာရအမြုတေနဲ့ အလှတရားတို့ကျန်ရစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
‘ကဗျာ’ ကိုလုံလုံလောက်လောက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုဖို့ဆိုရင်ဖွင့်ဆိုချက်တွေစုံစုံလင်လင်ပါဝင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဖွင့်ဆိုခ်က္တွေဟာ ‘ကဗျာ’ ဆိုတဲ့စကားလုံး/အေခ်ါအဝေါ်/ပစ္စည်းရဲ့ အင်္ဂါရပ်တွေဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
“အဲဒါ ကဗျာလား” ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတတ်နိုင်သလောက်ပြည့်ပြည်စုံစုံလေးဖြေဆိုရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်ပေါ့။
ပုဒ်အားဖြင့် ‘ကဗျာ’ လို့ဆိုနိုင်ပေမယ် ကဗျာအနှစ်သာရ/အရည်အသွေးဒီဂရီနည်းခြင်းများခြင်းကတော့ ထပ်မံသုံးသပ်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။
၃.၃။ ဖွင့်ဆိုချက်များကိုသုံးသပ်ခြင်း (အဆက်)
‘ကဗျာ’ လို့ပြောရင် ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာသိန်ုင်ချေအများဆုံးအရသိနိုင်ဖို့ အဘိဓာန်ဖွင့်ဆိုချက်များရှုထောင့်ကနေချဉ်းကပ်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဖွင့်ဆိုချက်များရဲ့ သော့ချက်စကားလုံးတွေကိုထုတ်ကြည့်လိုက်တော့ အမှတ်စဉ် ၁ ကနေ ၁၆ အထိရရှိပါတယ်။ အဲဒီသော့ချက်စကားလုံးအားလုံးရဲ့စုပေါင်းအဓိပ္ပါယ်ရလာဒ်ဟာ “ကဗျာ” ဖြစ်တယ်လို့ယူဆလို့ရနိုင်ပါတယ်။
ဖွင့်ဆိုချက်တွေအရ “ကဗျာ” ဆိုတာ
၇။ ‘ကဗျာ’အသိ/အတွေ့အကြုံ/”ဓာတ်” ပါရှိရ
အထက်ပါအချက်တွေကိုကြည့်ရင် အရေးအသားတစ် ခုဟာ အဆိုပါ ‘ကဗျာ’ ဖွင့်ဆိုချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီရင် အဲဒီအရေးအသားကို ‘ကဗျာ’ လို့ခေါ်လို့ရတယ်။ ကဗျာအနုပညာနဲ့လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်သလို ပစ္စည်းထဲမှာကဗျာအနုပညာဟာပါဝင်ဓာတ်စီးနေတာပေါ်လွင်တယ်။
Note: More posts on this topic will be published asabook. Please wait for this. – Admin.